Prasta Khabar-सरकारद्वारा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक
सरकारद्वारा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक
१५जेठ,हेटौंडा ।सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारद्वारा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जुन कुल बजेटको ६४.३ प्रतिशत हो ।
यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटको जम्मा २३.९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेट गत वर्षकोभन्दा ३७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
त्यसैगरी सरकारले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छैैन । तलब नबढाई महँगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको पोशाक भत्ता ७ हजार रुपैयाँबाट बढाएर वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको सुनाए ।
यस्तै कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न तलब आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् ।
बीमा रकम दुई लाख बनाईएको छ । जसमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र ५० प्रतिशत कर्मचारीले व्यहोर्ने गरीअर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट छ।